Ngaba akukho magorha kwindawo yebhlog? Meme: Amagorha ngaphakathi kubloga | Iindaba zeGajethi
ENgolunye usuku uRogelio, umthengisi wam osemthethweni we meme, yenzeke kum le apho wandimema khona ukuba ndixelele ukuba ngoobani amaqhawe am ngaphakathi kubloga. Njengokuba ndihlala ndibambe ixesha, kuye kwandithatha kancinci ukuphendula (ngeveki) kwaye ngeli xesha ndifumene isimemo esivela Yinja ukwenza meme efanayo. Ngoko ke masifike emsebenzini kunye nemibuliso kuni nobabini.
HNdibonile ukuba abanye kwabo bafumene le meme bayenzile ngokulahla igama elithile amaqhawe kwaye ndicinga ukuba ndiyasiqonda isizathu, kuba kwenzeka into efanayo kum.
SNdicinga ukuba iqhawe ngumntu othandwayo nohlonitshwayo, kwaye loo ntlonipho kunye nokuncoma kunwenwela kokubini emsebenzini nakumntu owenzayo. Mna ngokobuqu ndinayo iibhlog endizithandayo ngokuzimisela kwazo xa ndisebenza kodwa nangona kunjalo andisithandi isiqhamo saloo msebenzi. Kwelinye icala, kukho iibhlog ezenza iphepha elilungileyo elinomxholo olungileyo kodwa othanda abantu bakude kwindlela yam yokucinga.
PNdicinga ukuba igama elithi "amaqhawe" liye labangela ukukrokra okukhulu phakathi kwabalandeli bale meme. Ndiza kuhamba nokuhamba kwabandulelayo kwaye nditshintshe "amaqhawe" yi "Kuyakhuthaza", kuba ndiyakholelwa ukuba eli gama lichaza ngcono abantu abathi ngaxa lithile bakhonze njengomzekelo wokufunda okanye ukuphucula okuthile.
LUluhlu "lwabavuseleli" lunokuba lukhulu, kodwa ndiza kubambelela kwaba bathathu:
Eyokuqala yile 86400 ibhlog endandingayityeleli ixesha elide kuba ndikhetha iibhlog ngesihloko esithile hayi ezo zijongana nayo yonke into kancinci. Ngaphandle koku, yeyokuqala kuluhlu lwam kuba kuloo ndawo Ndifumanise ukuba iibhlog zikhona kwaye okwethutyana ndiye ndayijonga indlela eyakhiwe ngayo (amagqabantshintshi, iindidi, izihlobo zebhlog, njlnjl.) ukuzama ukwazi ukuba yayiyintoni ibhlog yebhlog kwaye yayiqulathe naziphi na izinto. Ndicinga ukuba ezinye zezi zinto ziya kuvakala zingaqhelekanga, kodwa ukuba uza kwenza inkqubo yebhlog, kwaye ungasebenzisi itemplate, kufanelekile ukuba wazi ukuba zeziphi izinto eziyenzayo. Ndithumela umbuliso ku alex yokunceda ungazi.
Okulandelayo Ibhlog kaEmezetaNangona ikwangumbhali jikelele njengangaphambili, ihlala ijolisa kwimixholo emininzi enxulumene nekhompyuter yiyo loo nto ndiyindwendwela nanini na ndinako. Ilungele loo nto kwaye kuba emva kokubona ubume beblogi, bendidinga ukwenza inkqubo kunye nendlela yokubonisa umxholo webhlog. Manz Ndacinga ukuba yeyona ifana kakhulu nale bendinayo engqondweni. Ndiye ndacwangcisa ubume be VinagreAssino.com ukulandela loo ka-Emezeta. Ngaphambi kokuba uthethe nantoni na, kuyinyani ukuba abasenanto yakwenza nokuyilwa kwezi ndawo zimbini, kodwa ngaphambi kokulungiswa kweebhloko zombini zazifana (iintloko ezibini, iikholamu ezintathu, unyawo kunye namanqaku amahlanu ubukhulu Inye).
Okokugqibela, kwaye ukuze ndingazandisi ngaphezu kokufuneka, ndifuna ukukhankanya Sirayeli de Greenshines njengomzekelo womsebenzi olungileyo kwicandelo lakhe (okanye ndicinga njalo) kodwa endihluke ngokupheleleyo kuye ngendlela yakhe zivakalise. U-Israyeli wehla iiperile njenge «Iibhlog ezibaluleke kakhulu kunye noosomashishini bewebhu 2.0 yelizwe lethu beza apho, njengesiqhelo, babesitya i-p **** yomnye nomnye, bexokozela kwikamva le-intanethi, iphepha lomdlalo odanyazayo, iibhlog ekungekho mntu uya kuzo nakwezentlalo. uthungelwano lwabasebenzisi ababhalisiweyo abasi-7, babuya badla i-p **** sya casita » ibhalwe kwiphepha layo okanye eli liyinxalenye ye- Udliwanondlebe kwimizuzu engama-20 apho ithi «...Iibhloko, ngokusisiseko, bakhonza ababhali babo ukuba bazenzele uthando ngokufunda amagqabantshintshi eebhloko zabo ngaphambi kokuba balale. Yindlela efana nayo nayiphi na enye into yokubaleka inyani… ». Ungavumelana naye okanye hayi (ityala lam) kodwa ngokungathandabuzekiyo liphumelele kakhulu ngamaphepha akhe yiyo loo nto esenza umzekelo wendlela yokwenza izinto ezithile. Ngendlela yokuqonda kwam Greenshines.com Yibhlog, kubume nakwisiqulatho, ngaphandle kokuba uSirayeli ebagxeka kwaye umxholo wabo uyile nto uyiyo.
Pndikhankanye okokugqibela zininzi iisayithi ezindikhuthazayo ngandlela thile kwaye ndihlala ndizama ukufumana into kubo ukuze indincede ndiphucule Umbulali weviniga. Ndidlulisela imeme kum Blogroll ukuba bafuna ukulandela ikhonkco. Imibuliso yesidiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ngaba akukho magorha kwindawo yebhlog? Meme: Amagorha ngaphakathi kubloga
Enkosi ngeGreenshines! Umntu ozibonakalisa ngoluhlobo uya kundinika ixesha elihle phambi kwekhompyuter kobu busika. Nditsaliwe yiPabloGeo kwaye ndenza umxholo wakho: yeyona nto ingcono onokuyenza. Masibone ukuba siyawuphumelela na umdlalo kwabo babeka amakhadi entengiso kumnatha kwifomathi yebhlog 😉
Molo johnymepeino, xa ndabona igama lakho ndacinga ukuba livakala liqhelekile kum, kunjalo PabloGeo. Ndiyavuya ukukubona apha kwaye siza kukubona kwibhlog yakho. Konke okugqibelele.